Maxamed C Carte oo soo dhoweeyey gudoonka cusub ee xildhibaanada aqalka sare. – Radio Daljir
Janaayo 22, 2017 10:10 b 0
Muqdisho, Jan 22 2017-Ra’iisul Wasaare Ku-Xigeenka dalka ahna Xildhibaan ka tirsan Golaha Shacabka ayaa ugu hambalyeeyay Gudoomiyaha cusub ee Aqalka Sare iyo Ku-xigeenadiisa xilka ay u doorteen xubnaha Aqalka sare.
Mudane Carteh ayaa sheegay in Aqalkan uu yahay mid ku cusub Soomaaliya islamarkaana looga baahanyahay guddoonka la doortay in ay la yimaadaan karti iyo hufnaan.
“Waxa aan Hambalyo u dirayaa Gudoomiyaha cusub ee Aqalka Sare Mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo Ku-Xigeenada Mudane Abshir Maxamed Axmed (Bukhaari) iyo Mudane Mowliid Xuseen Guhaad; waxa aanan shaki ku jirin in ay saaran tahay masuuliyad weyn oo u baahan daacadnimo iyo hawlkarnimo. Aqalka sare waa mid ku cusub dalkeenna, sidaa awgeed, gudoonka la doortay waxaa looga fadhiyaa taabagelinta iyo nidaaminta Aqalkan si wada-shaqaynta labada Aqal -Aqalka Sare iyo Golaha Shacabka- taabogal u noqdo”.
Ugu dambayn, Mudane Maxamed Cumar Carteh ayaa ugu baaqay dhamaan shacbiga iyo Xildhibaanada Aqalka Sare in ay la shaqeeyaan gudoonka cusub, sidoo kalena bogaadiyay ciidanka amniga oo ku guuleystay in doorashooyinku si nabad ah dalka uga dhacaan.
Hiigsi & Hayaan: Taxanihii 4aad iyo Wariye Cabdifataax Cumar Geeddi